Yini ongayibona edolobheni lase-Oxford | Izindaba Zokuhamba
USusana Garcia | | Amadolobha, E-England
I-Oxford yidolobha elaziwayo Ikakhulu eyunivesithi yayo, kepha lokho kungaba ukuvakasha okuthakazelisayo. Uma siye eLondon, singahlala sigibela isitimela futhi sifinyelele kuleli dolobha elihle ohambweni lwehora, kalula. Kuyo singabona indawo ethulile futhi yakudala kuneLondon uqobo, enamakhona athile athakazelisayo.
Iningi lezivakashi alizinikeli ngaphezu kosuku olulodwa lwe vakashela oxford, yize ungajabulela nezinsuku ezimbalwa ukubona konke ngokuthula okukhulu. Sizokunikeza uhlu lwezindawo ongazibona kuleli dolobha laseNgilandi uma uthathe isinqumo sokushiya iLondon ukuze ubone izindawo eziseduze.
1 Isigodlo saseBlenheim
2 ISonto Christ College
3 Ibhuloho Lokububula
4 Umtapo Wezincwadi waseBodleian
5 IThames Path
6 Isonto iSt Mary's
7 I-Oxford Botanic Garden
El Isigodlo saseBlenheim Itholakala eWoodstock, ngaphandle nje kwe-Oxford. Kuyindawo yokuhlala amaDukes aseMarlborough. Ukwakhiwa kwayo kusuka ngekhulu le-XNUMX futhi kunesitayela se-English Baroque. Ngaphakathi esigodlweni ungenza ukuvakasha okuhle okuqondisiwe, kepha futhi kuyindawo lapho kubanjelwa khona imicimbi. Izifundo zokuthwebula izithombe, umculo obukhoma noma imidlalo yekhilikithi ibibanjelwe ezingadini zayo ezibanzi. Kulesi sigodlo baphinde baqopha nezigcawu ze-movie ethi 'Harry Potter ne-Order of the Phoenix', ngakho-ke kuyingxenye yomzila womlingiswa odlula e-United Kingdom.
ISonto Christ College
Edolobheni lase-Oxford kuningi okuthiwa ngamaKolishi, ngoba kuyidolobha laseyunivesithi elibaluleke kakhulu. Elinye lamakolishi avakashelwa kakhulu izivakashi yi- ISonto Christ College, Isonto lawo liyisonto lombhishobhi lomuzi. Yize inhle kangakanani futhi indala le ndawo, iqiniso ukuthi okuheha iningi lezivakashi nakho kuhlobene noHarry Potter. Sizothola kule ndawo igumbi lokudlela elidumile lapho abahlangana khona nabathakathi, indawo bonke abavakashi abafuna ukuyibona.
Esinye sezimpawu zomlando ze-Oxford yi Ibhuloho Lokububula, ogama lakhe kufanele livele ngokufana nebhuloho lesigodlo saseDoge eVenice. Itholakala endaweni enhle kakhulu futhi iyibhuloho elihle, yize kulokhu kungekho ma-gondola ezungezile, futhi ayinhle njengaleyo eseVenice. Ngakolunye uhlangothi, ngaphansi kwebhuloho uzobona uphawu olubonisa ukuthi ukhombe kuphi indawo yokucima ukoma edume kakhulu, efinyelelwa umgwaqo omncane. Uzofika egcekeni lapho le ndawo ikhona, okuvame kakhulu ukuba khona ngabafundi.
Umtapo Wezincwadi waseBodleian
Ayikwazi ukulahleka, ku- idolobha laseyunivesithi njenge-Oxford, ukuvakashela umtapo wezincwadi othile odumile. Lo ngumtapo wolwazi obaluleke kunayo yonke eyunivesithi. Ingenye yezindala kunazo zonke eYurophu futhi ingeyesibili ngobukhulu eGreat Britain, ngemva koMtapo Wezincwadi waseBrithani eLondon. Uma singabalandeli baka-JRR Tolkien kufanele sazi ukuthi ubengumfundi noprofesa e-Oxford nokuthi uchithe isikhathi esiningi kulomtapo wolwazi. Futhi, kuyo kunencwadi ethi 'Red Book of Hergest', eyamgqugquzela ukuthi enze i-Lord of the Rings yakhe edumile. Ngaphambi kokungena, futhi uma ungakaze ungene kuwo, kuzofanele uthathe isifungo othembisa ukulandela imithetho futhi ungalimazi lutho kuso. Futhi ngokulandela indlela kaHarry Potter edlula e-Oxford, baphinde bathwebula ezinye izingxenye ze-movie kulabhulali.
Uma esikufunayo kungukuzivocavoca umzimba ngemuva kwezakhiwo eziningi zomlando, imitapo yolwazi kanye namanyuvesi, sine IThames Path. Indawo yokuhamba nokwenza umdlalo omncane, kusukela ekugijimeni kuya ekugibeleni ibhayisikili noma ukuhamba kancane. Kuyindlela eyakhiwe eceleni koMfula iThames futhi umzila wayo udlula e-Oxford, ngakho-ke singathatha ithuba lokujabulela umoya omusha.
Isonto iSt Mary's
La Isonto iSt Mary College Ingesinye sezikhulu kunazo zonke edolobheni, futhi impela yisakhiwo esihle esifanele ukuvakashelwa. Ingxenye yawo endala kakhulu namuhla ngumbhoshongo, owabuyela emuva ku-1270, yize kunezingxenye zawo ezangezwa kamuva, njenge-spire ne-pinnacles kanye ne-gargoyles. Kungenzeka ukuvakashela leli bandla, elinesitho esihle ngaphakathi, nombhoshongo, lapho singaba nombono omuhle wedolobha. Kuwo wonke amadolobha kunendawo esingakhuphuka kuyo ukuze sikwazi ukuyibuka sivela phezulu.
I-Oxford Botanic Garden
Kuwo wonke amadolobha amaNgisi singathola izingadi ezinkulu ezisimemayo ukuthi sihambe siphumule. Le ngadi iqale njenge- ingadi yezitshalo zokwelapha futhi namuhla inelinye lamaqoqo ezitshalo ahlukahlukene kakhulu emhlabeni. Uma singazi lutho ngezitshalo, singahamba ngaso sonke isikhathi futhi sijabulele ubuhle bendawo esinazo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Amadolobha » Yini ongayibona edolobheni lase-Oxford
Kuthiwani uma sishiya indlu yasemakhaya?